विभिन्न देशमा टीकाको साइत ‍- २०७७ - नेपाली पात्रो | Nepali Patro
नेपाली पात्रो > चाडपर्व > विभिन्न देशमा टीकाको साइत ‍- २०७८
विभिन्न देशमा टीकाको साइत ‍- २०७८
अक्टोबर 26, 2020
हरेक देशको स्थानीय पञ्चांगअनुसार एउटै प्रकृतिको मुहूर्त फरक समयमा परेको हुन्छ। नेपालमा शुभमुहूर्त भएको बेला अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकामा अर्कै प्रकृतिको मुहूर्त चलिरहेको हुन्छ। त्यसैले स्थानीय पञ्चांगबाट मात्र शुभमुहूर्त ज्ञान गर्न सकिन्छ। नेपालको पञ्चांग र समय नेपालका लागि मात्र उपयोगी हुन्छ। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले नेपालको स्थानीय पञ्चांगअनुसार चाडपर्व मनाउँदा गलत समय परेको तथ्यलाई हृदयंगम गरी नेपालमा गठित अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चांग निर्णायक समितिले २०७८ सालको बडादसैंमा विभिन्न देशका प्रमुख स्थानका लागि टीका ग्रहण गर्ने उपयुक्त साइत निर्धारण गरेको छ। विजया दशमीका दिन बिहान पूजा विसर्जन गरी देवीको प्रसादस्वरूप टीका र जमरा लगाउने विधान छ।
विभिन्न स्थानका लागि टीका लगाउने शुभसाइत–
काठमाडौ, नेपाल २९ आश्विन २०७८ प्रातः १०ः०२ बजे ।
देहली, भारत १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ९:५५ बजे ।
न्युयोर्क, अमेरिका १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ९:२१ बजे ।
केन्टुकी, अमेरिका १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०८:४५ बजे ।
टेक्सास, अमेरिका १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०८:१५ बजे ।
क्यालिफोर्निया, अमेरिका १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०७:१५ बजे ।
टोरन्टो, क्यानडा १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०८:३५ बजे ।
लन्डन, बेलायत १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः १०:०१ बजे ।
लिस्बन, पाेर्चुगल १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०९:५५ बजे ।
पेरिस, फ्रान्स १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०९:१५ बजे ।
टोकियो, जापान १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ११:०५ बजे ।
वेलिङ्टन, न्युजिल्यान्ड १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः १०ः३५ बजे ।
सिड्नी, अस्ट्रेलिया १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः १०:२५ बजे ।
मेलबर्न, अस्ट्रेलिया १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः १०ः३१ बजे ।
ब्रिसबेन, अस्ट्रेलिया १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः १०:२९ बजे ।
क्वालालम्पुर, मलेसिया १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०८:४५ बजे ।
सिंगापुर १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०८:४७ बजे ।
बैंकक, थाइल्यान्ड १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०८:१५ बजे ।
हङकङ १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०८:३३ बजे ।
सियोल, दक्षिण कोरिया १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०९:१५ बजे ।
रियाद, साउदी अरेबिया १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०८:१४ बजे ।
दोहा, कतार १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०७:५५ बजे ।
अबुधावी, यूएई १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०८:२१ बजे ।
तेल अभिभ, इजरायल १५ अक्टोबर २०२१ प्रातः ०९:०१ बजे ।
विजया दशमीका कृत्यहरू
अक्टोबर 8, 2019
अप्रील 1, 2020
महाअष्टमीको दिन गरिने कृत्यहरू
राष्ट्रिय पर्व बडादसैं
अक्टोबर 9, 2018
अक्टोबर 5, 20212हप्ताहरु
Binay Thapa Magar
अक्टोबर 6, 20212हप्ताहरु
Ram Kumar Bhattarai
अक्टोबर 7, 20212हप्ताहरु
विजया दशमीको टीकाको साईत विषयमा मैले नबुझेको कुरा-नेपालमा विहान 10:05 बजेको वेला न्युयोर्कमा अघिल्लो दिनको सांझ 08:10 बजेको हुन्छ भने त्यसै दिन नेपालमा प्रात:10:05 अनि न्युयोर्कमा 09:15 बजे टीकाको साईत कसरी पर्न गयो?
Chok Bahadur Karki
अक्टोबर 7, 2021 1 हप्ता
kati Baje Cha Sait Tikako
अक्टोबर 9, 2021 1 हप्ता
india ka sait
mukti Nath Kafley
अक्टोबर 10, 2021 1 हप्ता
yati subidha garai de ko maa hajur laii haardik dhanyabaad aavar Garda xu
bada dashain Barshik Rashifal Bhai Tika bijaya dashami chaite dashain dashain ekadashi lunar eclipse Narayan Putrada Ekadashi swasthani Tihar Yama Panchak Yekadashi एकादशी खण्डग्रास गोवर्धन पर्वत घटस्थापना चन्द्रग्रहण तिहार त्रेता युग द्वापर युग नयाँ वर्ष नारायण निर्जला एकादशी नेपाल संवत बडादसैं भगवती भगवान् विष्णु भगवान् श्रीकृष्ण भाइटीका महाभारत महालक्ष्मी यमपञ्चक यमराज युधिष्ठिर रामायण विजया दशमी विष्णु श्रीकृष्ण श्रीस्वस्थानी संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सूर्यग्रहण सूर्यनारायण हरिशयनी एकादशी
महा नवमीका कृत्यहरू
सेप्टेम्बर 29, 2017Nepali Patro
नेपालमा मनाइने धार्मिक र सांस्कृतिक चाडपर्वहरू
अक्टोबर 8, 2021Nepali Patro (Sudan Bhattarai Upadhyaya)
मार्च 1, 2017प्रा.डा. देवमणि भट्टराई
अक्टोबर 26, 2020Nepali Patro
rajesh मा फूलपाती
सरोज कटुवाल मा विजया दशमीका कृत्यहरू
सरोज कटुवाल मा विश्वकर्मा पूजा
Tara Kunwar मा २०७८ सालको बडादसैंका विविध साइतहरू
mukti Nath Kafley मा विभिन्न देशमा टीकाको साइत ‍- २०७८